Ogaden News Agency (ONA) – Masuqii Malaysiga oo Galaaftay Ra’iisul Wasaarihii Hore.
Masuqii Malaysiga oo Galaaftay Ra’iisul Wasaarihii Hore.
Posted by ONA Admin	/ July 4, 2018
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia Najib Razak, ayaa shalay la xidhay ayada oo lagu tuhun sanyahay fadeexad musuq-maasuq oo balaayin dollar lagu lunsaday inuu ku lug lahaa.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in Mr. Najib ay shalay gurigiisa ku xidheen wakiilada guddiga ka hor-taga musuq-maasuqa dalka Malaysia. Xadhiga Mr. Najiib ayaa waxa uu ku saabsan yahay sida la sheegayo lacag lagala baxay hay’adda horumarinta dhaqaalaha dalkaas ee magaceeda loosoo gaabiyo 1MDB.
Ra’iisul wasaaraha hore ayaa waxaa la filayaa in si rasmi ah dacwad loogu soo oogo Maanta oo arbaco ah. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa horey u sheegtay in 4.5 bilyan oo dollar laga xaday hay’adda 1MDB, ayada oo qeyb ka mid ah lacagtaas ay ku dhacday sanduuqyada lacageed ee Najib sida gaarka ah u leeyahay.
Fadeexaddan la xidhiidha musuqa ayaa sidoo kale hogaamisay in isbaheysiga Najib ay lumiyaan doorashadii dalkaas ka dhacday bishii May een soo dhaafnay, taasi oo ahayd markii ugu horeysay oo xisbigiisa laga adkaado tan iyo xoriyaddii dalkaas ee 1957-kii.